Semalt-I-Arhente yeHlabathi yeDijithali yeHlabathi
I-Semalt yi-arhente edijithali eyaziwayo kwihlabathi eyenza ubuchule kwiNjini yokuKhangela kunye nokuHlaziywa kweWebhusayithi . Ukusukela okokucofa kwiwebhusayithi yabo, kucacile ukuba banokuqonda okunzulu kokutsala umdla kwi-intanethi ngomxholo wabo okroliweyo, ukubiza ngqo kwizenzo, kunye nokusetyenziswa kombala ngokufanelekileyo. Kunye neqela leengcali ezifezekisiweyo ezichanekileyo kwiilwimi ezininzi, kulula ukubona ukuba kutheni uSemalt enamakhulu eziphononongo ezilungileyo kunye neziphumo ezivela kwihlabathi liphela. Owu, kwaye ungakulibali ukuthi molo kuTurbo Turtle!
Phambi kokuba sifike kwiipakeji zabo, masihlephule yonke into abayenzayo.
UkuKhangela kweNjini yokuKhangela (eyaziwa ngokuba yi-SEO) ikukhulisa ngokugcwala ukugcwala kwitrafikhi eqondiswa kwiwebhusayithi yakho ngokwandisa ukubonakala kwephepha lakho kwiNjini yokuKhangela. Ukuze ubonakale kwisiphumo sokuKhangela kweNjini yomsebenzisi, iphepha lakho liya kudinga ukuboniswa. Isalathiso yinkqubo yeNjini yokuKhangela eqokelela ulwazi kunye neSigcawu (esaziwa ngokuba yiBot okanye isiKhonkwane) ukuze ikwazi ukuhlela umxholo wokuhambelana nayo yonke enye into ekuvimba weenkcukacha. Ukuze isigcawu sifumane iphepha lakho, baya kudinga ukufumana ikhonkco lakho ngelixa liphanda kwenye iwebhusayithi. Oku kufunyanisiweyo kubizwa ngokuba kukubuyela umva.
Nje ukuba i-Spider ifumane iphepha lakho, iya kuqokelela zonke iinkcukacha zayo ezinokuzifumana de ibe nguLindelwa kude kwindawo yakho. I-injini yokuKhangela iya kuthi emva koko inike umxholo wakho amanqaku afanelekileyo, anokuthi ancede okanye onakalise ukwenzakala kwakho kwe-SERP (Amaphepha eNjini yokuKhangela) ukubekwa. Xa i-injini yokukhangela ikwiphepha lakho, iyakugweba ezi zinto zilandelayo:
Ulwimi lwesiqulatho: Ngaba umsebenzisi unokufunda umxholo wakho?
Ukuhambelana ngomxholo: Ngaba umxholo wakho ubandakanyekile kwikota yokukhangela?
Isicatshulwa somzimba: Ingaba isondele kangakanani imixholo yakho kunye nekota yokukhangela?
Isihloko sephepha: Yintoni eyona nto kugxilwe kuyo kwinqaku lakho?
Imifanekiso kunye nemifanekiso: Ngaba izinto ezibonakalayo ziyawuxhasa umxholo wakho?
Indawo: Ngaba indawo yakho yomxholo ixhomekeke?
Ngayo yonke i-SEO yakho idityaniswe kakuhle, kuya kufuneka ube nomjelo oqinisekileyo wabathengi abanokucofa kwiwebhusayithi yakho. Kodwa ungatsho njani ngokungapheliyo ukuba iwebhusayithi yakho ifikelela kubaphulaphuli ekujolise kuyo? Ayisiyiyo loo nto, kodwa ungazi njani ukuba abaphulaphuli bakho basabela ngendlela ofuna ngayo? Ngokuqinisekileyo, sinokuhlala sijonga ingxelo yakho yentengiso kwaye sahlulele kuloo nto. Kodwa yonke ingxelo yokuthengisa ikuxelela ukuba yimalini oyenzileyo. Ukuba ngokwenene ufuna ukuqonda ukuba umthengi usabela njani kwiwebhusayithi yakho, kuyakufuneka ukuba umbe ngokunzulu kwinkqubo yohlalutyo lweWebhu.
Uhlalutyo lwewebhu lusetyenziselwa ukulinganisa, ukuqokelela, kunye nokuhlalutya iingxelo ngomnqweno wokuqonda umkhwa wabaphulaphuli bakho ukuze ukwazi ukwenza iwebhusayithi yakho ngokufanelekileyo. Ezi nkqubo ziya kukunika ulwazi oluphambili kwezi zinto zilandelayo.
Inani elipheleleyo leetyelelo ezizodwa
Inani elipheleleyo leetyelelo eziphindiweyo
Leyo yinkcukacha eninzi yokuhluza! Kodwa kubalulekile ukuba ube nayo le nto njengoko iza kukunceda ukwandisa ubukho bewebhu ngokupheleleyo. Ngohlalutyo lweWebhu, unokwenza isigqibo ngoku kulandelayo:
Yenza isigqibo sokuba yeyiphi na amagama aphambili aqhuba ukugcwala kwindawo yakho.
Yenza isigqibo sokuba yeyiphi imveliso ehlanganisa eyona nto iphambili.
Amaxabiso otshintshelo asisiseko sokunxibelelana kwabathengi.
Yenza umxholo ojolise kwinxalenye yakho.
Ngelixa kunokwenzeka ukwenza konke oku ngokwakho, kuyakuthatha ixesha lokuba wenze ishishini lakho ngokupheleleyo. Njengobomi bokwenyani, uya kuhlala utsala abathengi abaninzi befestile kunokuba uya kuba ngabathengi bokwenyani. Ke kufuneka ubeke umzamo wakho ongcono wokutsala abantu abaninzi ngangokunokwenzeka. Yiyo loo nto kufuneka uqeshe uSemalt!
Ukuba ujonga iphepha labo , bancede amakhulukhulu eenkampani kwihlabathi liphela ukufumana amanani anqakraza-amanani afanelekileyo ukwenza inzuzo. Ityala ngalinye linonxibelelwano oluya kwezi zilandelayo:
Ngaphambi nangemva kweMetric Sheets
Njengoko ubona kwikliphu endikunike apha ngasentla, uSemalt wandise ezi nkampani ukubala iindwendwe ngenyanga kubasebenzisi abayi-114 ukuya kubasebenzisi abayi-1,771! Lilixa le-15 inani labasebenzisi ababenalo ngaphambili! Yile nto ithethwa ngumthengi malunga neziphumo zabo:
Kwaye ukuba uphononongo olubhaliweyo kunye neenombolo ezinzima alwanelanga, uSemalt ukwiphepha elinikezelwe kuhlolo lwevidiyo. Olu hlaziyo luvela kubathengi abanelisekileyo kwihlabathi liphela!
Ke uSemalt angakunika njani iziphumo ezifanayo? Into yokuqala onokuyenza kukusebenzisa ithuba labo lokubonelela ngovavanyo olwenziwe nguYavuz kuqhaqho. Ngokukhawuleza xa ucofa kwiYesalt.com, uya kufumana ibha eya kuhlalutya iwebhusayithi yakho kwangoko. Ukuze ubone le ngxelo, kufuneka wenze iakhawunti. Le ngxelo iza kushwankathela iziphumo ezifunyenweyo kwiphepha lakho lewebhu kwaye iphakamise iphakheji enokunceda ukwanda kwezi ziphumo. Ezi phakheji zibandakanya i- AutoSEO , i- FullSEO , kunye nohlalutyo .
I-AutoSEO ikunika ezi zixhobo zilandelayo:
Ukuphuculwa kokubonakala kweWebhusayithi
Uphando lwamagama aphambili
Iingxelo zeWebhu zohlalutyo
Ezi iibhlokhi zokwakha eziyimfuneko zokuqalisa umkhankaso we-SEO ophumelelayo! Nokuba ufunda i-SEO xa usiya, izixhobo ezikhoyo kuwe kwiphakheji ye-Auto SEO kulula ukuyisebenzisa kwiwebhusayithi yakho. Le yeyona nto ibiza kakhulu, ekhawulezayo, kwaye inesebenzayo yokuhambisa uSemalt.
Ungathenga ulingo lweentsuku ezili-14 ngeesenti ezingama-99. Emva koko, ungathenga iinyanda ngenyanga ngenyanga ngala maxabiso alandelayo:
Inyanga enye ye- $ 99
Iinyanga ezi-3 zeedola ezingama-267
Iinyanga ezi-6 zeedola ezingama-504
Unyaka omnye kwi- $ 891
Iphakheji ye-FullSEO inomnye weengcali zikaSemalt ezifezekisiweyo ezenza oku kulandelayo:
Ukulungiswa kweMpazamo kwiWebhusayithi
Inkxaso kunye nokuBonisana
Ngesi sicwangciso, injongo kaSemalt kukutyhala iwebhusayithi yakho phezulu kweSERPs. Omnye wabo baphumeleleyo wabelwe iphepha lakho ukuze basebenzise bonke oovimba babo ukuze iphepha labo liphumelele kakhulu. Njengoko ubonile apha ngasentla nge upasuajitr.com, banokutsiba ngqo kwiphepha kwaye baqale ukusebenza ngomlingo wabo kwangoko.
Kwaye ukuba ufuna ukwazi ngakumbi malunga neengcali zabo, unokufumana imifanekiso yabo kwiwebhusayithi iphela. Umzekelo, uYana Shafarenko (Umchwephesha we-SEO) kunye no-Natalia Khachaturyan (Isicwangcisi seMxholo) baboniswa “njengogada kwizikhundla zakho” kwiphepha lokuqala lewebhusayithi yeSemalt. Apha ngezantsi kukho uluhlu lwezinto eziphunyeziweyo abazifezekisileyo ngelixa besebenzela uSemalt.
Iqela leengcali zabo babhala amanqaku ebhlogi kaSemalt. UVladislav Polikevych (Umshicileli), u-Olga Pyrozhenko (Umphathi weNtengiso), kunye no-Eugene Serbin (kwiNtloko ye-SEO) babhale amanqaku aliqela malunga neendlela ezikhoyo ze-SEO kwaye bathathe amathuba kwimakethi yakho. Kwaye ndakhankanya ukuba banamaphepha angama-26 amanqaku eblogi? Ngamanqaku amahlanu kwiphepha ngalinye kunye namanqaku amabini okugqibela, lawo ewonke amanqaku angama-127 (njengangoku) afumaneka MAHHALA! Phakathi kobungqina babo kubathengi kunye namanqaku abawabonelela mahala kwibhlog yabo, unemithombo emininzi onokuyisebenzisa ngaphambi kokuba uthathe isigqibo sokuthenga iphakheji epheleleyo ye-SEO yeSaltalt.
Iphakheji epheleleyo ye-SEO iyahluka phakathi kwabathengi, ke, ngelishwa, andinakukunika ixabiso ngqo. Kodwa njengoko sele nditshilo apha ngasentla, inani elothusayo lophononongo oluqinisekileyo kunye nemikhankaso ephumelelayo iyathetha indlela ebaluleke ngayo iphakheji ye-SEO epheleleyo yeSemalt. Banikezela nezaphulelo ukuba ubhalisela ukubhalisa ngenyanga:
Iinyanga ezi-3 zinika ishumi leepesenti
Iinyanga ezi-6 zinika i-15% isaphulelo
Iinyanga ezili-12 zikhupha iipesenti ezingama-25 zikhutshiwe
Okokugqibela, kukho iphakheji yeeWebhu zohlalutyo lukaWesalt, ezibandakanya ezi nkonzo zilandelayo:
Iiwebhusayithi zokujonga ukujonga
Vula ukubonakala kwewebhusayithi
Jonga iiwebhusayithi ezikhuphisanayo
Chonga amathuba okwenziwa ephepheni
Le yiphakheji ekuxelela ukuba wonke umsebenzi wakho ukukhokelela kwimpumelelo okanye ukutyhila unomsebenzi omninzi ekufuneka wenziwe. Ngaphandle kolu lwazi, ngekhe ukwazi ukuqhuba iwebhusayithi yakho ukuya phezulu kwii-SERPs, okanye uhlale phezulu ukuba sele ukho. Ulwazi ngamandla. Kwaye ngalo mandla, unokwenza oku kulandelayo:
Jonga ikhuphiswano lakho ukuze ubone ukuba benza ntoni
Thelekisa igama lakho eliphambili kunye nezinto ezenzeka ngoku
Fumanisa amathuba akwiwebhusayithi yakho
Ngokubhekisele kumaxabiso, babonelela iiphakheji ezinamagama aphambili kunye nomda wephakheji. Bajongeka ngoluhlobo:
I- $ 69 / ngenyanga yamagama aphambili angama-300, iiprojekthi ezi-3, kunye neenyanga ezi-3 zembali yesikhundla
I- $ 99 / inyanga ye-1,000 yamagama aphambili, iiprojekthi ezili-10, kunye nonyaka omnye wembali yobume
I- $ 249 / inyanga ye-10,000, amagama angundoqo, iiprojekthi ezingenamkhawulo, kunye nembali yesikhundla esingenamkhawulo
Ukuba ubhalisela iinyanga ezininzi, unokugcina oku kulandelayo:
Iinyanga ezili-12 zinika ama-25%
Phakathi kwazo zonke uhlolo olwenziweyo uSemalt ngokuzingca abonisayo kwiwebhusayithi yabo, iibhlog kunye neendlela zokudumisa ezizezabo kwiilwimi ezahlukeneyo, kunye namaxabiso abo afikelelekayo, kulula ukubona ukuba kutheni uSemalt yenye yezona arhente zibalaseleyo zehlabathi. Nje ukukhangela iwebhusayithi yabo, unokubona ukuba bayikhathalele ngokwenene into abayenzela i-SEO kunye noHlahlelo